Boutique Apartments Bodensee - Hard
Bregenz District, Vorarlberg, Austria
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguInes
IBoutique Apartments Bodensee ibekwe kwisakhiwo esidweliswe ngokwembali ukusuka ngo-1910, sifakwe kwindawo enoxolo yelali eHard, kwaye kukuhamba nje kude kumahlathi omlambo i-Ach kunye ne-promenade yechibi.
Amagumbi akhukuliswe zizikhukula ahlaziywe ngokupheleleyo kwaye ngononophelo kwaye axhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into ukwenza nzima ikhaya lakho kwiholide yokuphumla neyokuphumla eLake Constance. Indawo yokuzimela entle kakhulu enamakhitshi ama-2 ahlukeneyo axhotyiswe ngokupheleleyo, i-WIFI enesantya esiphezulu. Isitshixo-Sikhuselekile.
Indawo yokulala yamantombazana yangaphambili sisakhiwo esithandekayo esidweliswe kwiBanga lesi-II ukusuka kwi-1910. Izindlu ze-boutique zihlaziywe ngononophelo kwaye zahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2018 ukuze zibonelele zonke izibonelelo zokuphumla kunye nokuphumla. Uyilo oluzolileyo noluqwalaselweyo olunokwakheka okuninzi kwendalo kunye neembekiselo ezikufutshane, ichibi elithandekayo kunye neentaba.
La magumbi mabini abonelela ngesiseko esifanelekileyo sohambo oluya ezintabeni kunye neLake Constance. Njengoko zijongene nje enye kwenye, zilungele abahlobo kunye/okanye usapho oluhamba kunye.
"I-Ach riverside woods" inamagumbi amabini ahlukeneyo: Igumbi lokulala eliPhambili elinebhedi enkulu yenkosi (180x200) kunye nencinci, igumbi lokulala le-2 kunye nentsha, emhlophe "yebhedi": ubungakanani bukakumkanikazi (140x200) kunye nebhedi ephezulu (90x200) . Idesika encinci kunye nesitulo. Indawo yokuhlala ezaliswe zizikhukula ezikhanyayo kunye negumbi lokutyela elinezixhobo ezipheleleyo, ikhitshi elitsha (isitovu sokungenisa, i-oveni, ifriji enkulu, njl.njl.) kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Iketile, "Bialetti" umenzi we-espresso moka kunye nomatshini weNespresso. I-daybed ebuyiselweyo yoqobo esuka kwindawo yokulala yentombazana yangaphambili inika iimbono ezinoxolo zehlathi elikufuphi nomlambo.
I "Swiss Mountain view" inegumbi lokulala eliPhambili elinebhedi ephindwe kabini (180x200), isitulo sokufunda esikhululekile kunye nendawo evulekileyo, indawo yokugcina evulekileyo, kunye negumbi lokuhlala elinomtsalane, elinezikhukula kunye negumbi lokutyela elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (isitovu, i-oveni, ifriji, njl) kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Nalapha: Iketile, "Bialetti" umenzi we-espresso moka kunye nomatshini weNespresso. I-daybed ebuyiselweyo yoqobo esuka kwindawo yokulala yentombazana yangaphambili inika iimbono ezinoxolo zehlathi elikufuphi nomlambo. Ibhedi entsha, ekhululekile yesofa ayinikezeli nje umbono omhle weentaba zaseSwitzerland, kodwa kunye nendawo yeendwendwe ezimbini ezongezelelweyo (140x200).
Omabini amagumbi okuhlambela axhotyiswe ngebhafu ye-enamel / ishawa kunye nomatshini wokuhlamba.
Isixeko saseMunich yiyure ye-3 yokuqhuba, iZurich iyure elungileyo yokuhamba, kodwa kukho amatye anqabileyo okwakha anomdla ngakumbi, anje. ISt. Gallen (CH) okanye uLindau (D), ngokuqinisekileyo olufanele ukutyelelwa.
Unyaka wonke ungakonwabela ukuzola kunye ne-ambience epholileyo yeBoutique Apartment kunye nokuhamba kwendalo. Kukwakho neendawo zokuzilolonga eziqala kanye phambi komnyango kunye nazo zonke iintlobo zemidlalo ekufutshane (ithenisi, ukukhwela ihashe njl.njl.).
Umbuki zindwendwe ngu- Ines
Siyalithanda (ukuhamba) ihlabathi. Sikunye nabantwana bethu - ukuza kuthi ga ngoku - siphonononge izixeko ezininzi kunye namazwe, safumanisa imimandla engoyena ubalaseleyo, sanyuka iintaba saqubha, santywila emanzini saza sahamba ngenqanawa ukusuka kwezona lwandle zintle. Senze abatsha kwaye sadibana nabahlobo bakudala abahlala kwihlabathi liphela. Sobabini siye sahlala saza sasebenza kwamanye amazwe, eMzantsi Merika naseAsia.
Ngo-2017 siphile iphupha lethu: uhambo lokujikeleza ihlabathi neentombi zethu sikhangela ezona ndawo zintle kwihlabathi. IiNdawo zethu zeBoutique eBodensee eLake Constance ngokuqinisekileyo zikuluhlu :-). Sijonge kakhulu ukukubamba apho kwaye sabelane ngothando lwethu lweLake kunye neentaba.
Siyalithanda (ukuhamba) ihlabathi. Sikunye nabantwana bethu - ukuza kuthi ga ngoku - siphonononge izixeko ezininzi kunye namazwe, safumanisa imimandla engoyena ubalaseleyo, sanyuka…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bregenz District